Isi mmalite nke osimiri Mundo, ihe ịtụnanya sitere n'okike | Akụkọ Njem
Isi iyi nke osimiri Mundo
Louis Martinez | | Ecotourism, Getaways
Isi iyi nke Mundo osimiri bụ otu n'ime ihe ndị kasị mma mara mma phenomena n'ógbè Albacete. N'ileghachi anya na ya, ị nwere ike iche na ị nọ na nsụda mmiri nke Hawaii. Otú ọ dị, ị nọ n'ime Ugwu ugwu Alcaraz, otu n'ime ndị na-eme ka ihe Ugwu ugwu prebetic.
Osimiri Mundo bụ ụtụ nke Nchekwa, nke ọ na-esonye mgbe ọ natara, n'aka nke ya, osimiri isi okwu na nke Vega de Riopar. Ma nke mbụ, ọ na-ewe njem nke gafere ọtụtụ obodo, nke ọ bụla mara mma na akụkọ ihe mere eme. Otú ọ dị, anyị agaghị atụ anya. Ka anyi bido site na isi iyi nke mmiri Mundo.
1 Ọmụmụ nke osimiri Mundo, ihe pụrụ iche
1.1 Mgbe na-aga na-esi ebe ahụ
1.2 Zọ njem njem nke isi iyi nke osimiri Mundo
2 Mundo ụzọ mmiri
2.3 Nke a
Ọmụmụ nke osimiri Mundo, ihe pụrụ iche
Dị ka anyị gwara gị, a mụrụ osimiri Mundo na ugwu Alcaraz. Kpọmkwem, ọ na-apụ site na ọgba miri emi. A maara ha site na kilomita iri atọ na abụọ a. N'aka nke ya, olulu ahụ dị n'elu elu nke karst ugwu.
Klaasị nkume a nwere oghere dị iche iche nke mmiri na-esi na ya agafe. N'ihi ya, Mundo osimiri jet ọ dara n'ụdị nsụda mmiri mgbe ọ na-akpụ ọdọ mmiri. Site na ndị a, ọ na - amalite nrugharị ya. Ọhụụ nke ọpụpụ nke mmiri na ọdịda ya n'etiti ahịhịa bụ ihe ngosi pụrụ iche.
Mgbe na-aga na-esi ebe ahụ
Oge kacha mma iji wee hụ ebe iyi Mundo na ịma mma ya niile bụ primavera. Mgbe ahụ ugboelu nke mmiri na-apụta n'ike dị egwu n'ihe a na-akpọkarị "mbibi."
Iji ruo ebe a mụrụ osimiri ahụ, ị ​​ga-ejiriri ụgbọ ala. Ebe ọ bụ na Nkịtị, ị ga-ewere ụzọ nke na-aga Ahịrị. Ihe dị ka kilomita isii ka e mesịrị, ị ga-ahụ ntụgharị nke na-aga ebe ahụ. Ga-eru nke a mgbe njem ọzọ kilomita abụọ. Echegbula banyere na-adọba ụgbọala n'ihi na i nwere a adọba ụgbọala nwere ikike maka otu narị ụgbọ ala na bọs isii. Ma, mgbe ị hụrụ isi iyi ahụ, ị ​​ka nwere ọtụtụ ihe ị ga-eleta n'okporo mmiri Mundo.
Zọ njem njem nke isi iyi nke osimiri Mundo
Ihe mbụ anyị chọrọ ịkwado bụ ka ị mee ọmarịcha ụzọ njem njem a. Akụkụ nke otu ebe a mụrụ osimiri ahụ ma nwee ogologo ihe dị ka kilomita asaa. Otú ọ dị, ụzọ ahụ adịghị mfe n'ihi na ọ na-agafe ebe dị elu ruru mita XNUMX ma nwee ụfọdụ dị ize ndụ.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị kpebie ime ya, ọ ga-eju gị anya site na ọdịda ala ọ na-enye gị. N'ezie, ọ na-agafe na Calares del Mundo na La Sima Natural Park. Na mgbakwunye, ụzọ ahụ rutere n'ọnụ ọnụ ọgba ahụ nke iyi Mundo na-apụta. Iji mee nke a, ị ga-achọ ikike pụrụ iche nke ga-enyekwa gị ohere ịbanye na ya maka ihe dịka mita XNUMX na-enweghị mkpa maka ihe mkpuchi. Ma anwala igwa n'ihu. Nke a dabara adaba naanị maka ndị ọkachamara gọọmentị.
N'ọnọdụ ọ bụla, ụzọ ahụ kwesịrị ya. Ga-ahụ ebe dịka nke ya Cala nke Ụwa, ala dị larịị nke nwere ọtụtụ olulu mmiri na-esi na ya abanye n'ime ọgba ahụ. Emechaa, olulu a ga-achụpụ ya, na-ebute isi iyi nke osimiri Mundo. Ga-ahụ udele, ugo na ụdị ndị ọzọ na mpaghara ahụ.
Mundo ụzọ mmiri
Ọbụghị naanị isi iyi nke osimiri Mundo mara mma. Ọ dịkwa mma ịga n'ihu njem ya ruo mgbe ọ kwụsịrị na Segura. Njegharị a gafere obodo mara ezigbo mma nke anyị ga-agwa gị ọzọ.
Obere obodo a na-edebe ihe nketa kachasị ochie na mpaghara niile. N'ime ya, anyị na-akwado ka ị gaa na nke foduru nke nnukwu ụlọ Oge Muslim na chọọchị nke mmụọ nsọ, E wuru na narị afọ nke XNUMX, mana eweghachiri ya kpamkpam ma ọ nwere frescoes Gothic.
Echiche nke Riópar
Ọzọkwa, ị pụrụ ịhụ na Riópar na Lọ ihe nkiri nke Royal Factory nke San Juan de Alcaraz. Ọ bụ ihe akaebe dị ndụ nke ụlọ ọrụ ọla kọpa na ọla nke biri n'obodo ahụ n'agbata narị afọ nke XNUMX na nke XNUMX bụ nke iwu eze nyere. Carlos nke Atọ.
Emi odude ke obodo nke Molinicos, A maara ógbè a kpọmkwem dị ka Ríomundo. Ọ dị na gburugburu ebe obibi nke ihe ùgwù, na ọtụtụ pine na ero. Na mgbakwunye, ọ ga-atọ gị ụtọ nke ukwuu ịgagharị n'okporo ámá ya pụrụ iche wee hụ akwa ochie ya.
Ihe ndị ọzọ metụtara ya na mpaghara Isso, obere obodo dị n'akụkụ aka ekpe nke osimiri Mundo. N'ime ya, ị nwere ike ịga na chọọchị Santiago Apóstol, nke emere na narị afọ nke iri na asatọ na ụlọ nke ihe oyiyi nke onye nchebe nke Isso, na Towerlọ elu Almohad nke XIII nke gụnyere nnukwu ụlọ taa apụ n'anya.
Mana, karịa ihe niile, anyị na-adụ gị ọdụ ka ị hụ ihe dị iche iche àkwà mmiri nke gafere osimiri. A na-ahụta ha dịka ndị Rom, agbanyeghị na ha mechara. Mana, otu o sila dị, ha bụ akụkụ nke mbara ala mara mma nke ukwuu.
Akpọkwara «The Serrana ọla», obodo a bu ebe ndi njem nlere maka ihe nkiri 'Ọwụwa, nke bụ obere ihe', ebe ọ bụ na a gbagburu ya n'akụkụ ya n'okporo ámá ya. Ma o nwekwara isi ihe ndị ọzọ na-adọrọ mmasị, na-amalite n'okporo ụzọ ya dị warara ma na-agba agba.
You nwere ike ịga na Parish Church of the Assumption, nke e wuru na narị afọ nke XNUMX. N'ime, ị nwekwara ike ịhụ otu nnukwu baroque ngwa nke XVII. I nwekwara ike ịga n'okpuru Mora Arch, nke nwere akụkọ banyere ya enchantments; gaa na mmiri mmiri na ọwa mmiri na ịbịaru nso Echiche Híjar, nke na-enye gị echiche dị egwu banyere ugwu Albacete.
Ele nke Férez
N’ikpeazụ, anyị ga-agwa gị gbasara obodo a bụkwa ebe ihe nkiri ahụ e kwuru n’elu kwuru. Na mgbakwunye, ị pụrụ ịhụ na ya na- chọọchị Santiago Apóstol, nke bụ saịtị nke Mmasị Ọdịbendị na nke nwere ụlọ Espino Chapel mara mma; ihe Ihe nketa nke Nwanyị Nwanyị anyị nke Betlehem, ya na polychrome mara mma nke ịchụ àjà, na Ventlọ ndị mọnk na Chọọchị nke ndị Kamel ahụ agbagha, nke emere na njedebe nke narị afọ nke XNUMX.
Na mmechi, isi iyi nke Mundo osimirina Castilla la Mancha, na-enye gị ihe ngosi ebumpụta ụwa nke oke ịma mma. Mana gburugburu ya dịkwa mma maka nleta gị maka nnukwu ihe nketa ya na nnukwu uru obibi. Chọghị ịma mpaghara ahụ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways » Isi iyi nke osimiri Mundo